Nanao fihetsiketsehana ny Montenegrina mba hanohitra ny fanafihana mitam-piadiana nihatra tamina mpanao gazety iray ary… · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Mey 2018 5:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Italiano, Ελληνικά, русский, Français, English
Fihetsiketsehana “atsaharo ny herisetra” ao Podgorica, 9 May 2018. Sary avy amin'i Damira Kalac, nahazoana alalana.
Voatifitra teo amin'ny tongony ilay mpanao gazety Montenegrina iray tamin'ny 8 May, izay toa hita fa fanafihana efa nomanina.
Ny 9 May, olona an-jatony maro no nanao hetsi-panoherana tao Podgorica renivohitra, nitaky ny hampitsaharana ny tsimatimanota amin'ny heloka bevava sy ny fiainana tsy misy tahotra.
Mpiherisetra tsy fantatra no nitifitra an'i Lakic, mpanao gazety ao amin'ny fampahalalam-baovao mpivoaka isan'andro Vijesti teo anoloan'ny trano fonenany ao afovoan'ny renivohitr'i Montenegro. Rehefa nianjera teny amin'ny sisin-dalana izy ary naratra, dia nahita lehilahy roa nandositra. Nitatitra ny Vijesti fa raha mbola any amin'ny toeram-pitsaboana izy, dia tsy atahorana ny ratra eo amin'ny tongony havanana.
Eo amin'ny mponina 643 000 eo ho eo, iray amin'ireo firenena kely indrindra any Eorôpa i Montenegro. Hatramin'ny taona 1991, nentin'ny sangany ara-politika iray hatrany ity firenena Balkana ity, notarihin'ny filoha voafidy Milo Đukanović. Milaza ireo mpanao gazety mitatitra momba ny heloka bevava, ny kolikoly, ny fandraharahana sy ny politika milaza fa efa tsy zava-baovao ny fampitahorana sy ny fandrahonana mivantana.
Nitatitra ny Balkan Insigh fa efa nisy nanafika i Lakic tamin'ny lasa. Tamin'ny taona 2012, notafihan'ny lehilahy iray teo anoloan'ny trano fonenany izy, fotoana fohy taorian'ny nitaterany momba ny zavatra nataon'ny orinasa iray mpanao Sigara ao Montenegro.
Tahaka izany koa no nahazo ireo mpanao gazety hafa nitatitra momba ny olana ara-kolikoly ao amin'ny faritra, efa nahazo fandrahonana ho faty nandritra ny taona maro mihitsy aza izy.
Nanambara ny polisy eo an-toerana fa “nakaton'izy ireo ny tanàna”, saingy tsy mbola tratra izay olona ahiahiana.
Omaly hariva, nisy nitifitra teo anoloan'ny trano fonenany tao Podgorica ilay mpanao gazety Montenegrina Olivera Lakic.
Zava-dehibe ny mampahatsiahy fa hatramin'ny taona 2014, fikasana telo hamono olona, fanafihana ara-batana 103 tamin'ireo mpanao gazety & fandrahonana 257 no voarakitra ao amin'ny WB
Mpanao gazety Sloba Georgiev nampitaha ny toe-javatra tamin'i Slovakia, izay nahitana fihetsiketsehana goavana taorian'ny famonoana ilay mpanao gazety mpanao famotorana, Ján Kuciak izay nitarika ny fialàn'ny praiminisitra Róbert Fico.
Niteraka tany lonaka ho an'ny mpamono olona mba hivoaka ny haizina sy hitifitra vehivavy mpiara miasa aminay avy ao Vijesti ny hetsika fanaratsiana goavana ataon'ny manampahefana Montenegrina amin'ireo rehetra maneho hevitra hafa.
Tokony hihetsika ihany koa ny olom-pirenena ao Montenegro, angamba tahaka ny nataon'ny vahoakan'i Slovakia.
Niantso hetsi-panoherana teo anoloan'ny governemanta ny Fikambanan'ny Mpanao gazety Matihanina ao Montenegro (DPNCG) ny 9 May, ary nanamarika fa:
Tranga fanafihana maro tsy voavaha, anisan'izany ny sasany izay vetivety dia lasa lany andro [izany hoe, tsy notakian'ny lalàna hamaha azy ireo (raharaha) intsony ny fitondram-panjakana ], ka miteraka tontolo izay tsy lasa zavatra tsy mahazatra, fa zavatra mateti-pranga ny manafika vehivavy mpanao gazety manoloana ny tranony. Mbola miahiahy bebe kokoa amin'ity tranga ity izahay satria nampiasaina ny basy. Ny fotoana hafa nitrangan'izany dia ny famonoana an'i Duško Jovanović …
Nampiasa ny tenirohy #BezStraha, midika hoe “Tsy misy tahotra” ireo mpisera media sosialy avy ao Montenegro rehefa nandefa votoaty momba ny fanafihana sy ny fihetsiketsehana.
Olona an-jatony maro, anisan'izany ireo mpanao gazety, mpikambana ao amin'ny antokon'ny mpanohitra sy ny mpikatroka fiarahamonim-pirenena no nanatevin-daharana ny fihetsiketehana 9 May teo anoloan'ny governemanta. Nilaza ny talen'ny Vijesti, Željko Ivanović fa tsy mahagaga ny heloka bevava tahaka izany ao anatin'ny fiarahamonina izay analàna baraka ho mpamadika ireo mpitsikera ny fitondran'i Milo Đukanović.
Sioka: Tantara an-tsary tamin'ny fihetsiketsehan'ny olom-pirenena noho ny fanafihana ny mpanao gazetin'ny Vijesti, Olivera Lakić. #WithoutFear
Sora-baventy: “Tena ilàna fahamehana faratampony ny toe-draharaha” [pun]; “Atsaharo ny herisetra”; “Ho amin'ny fiainana tsy misy tahotra”; “Tsy lasitra ny mandefa baomba isan'olona”;
Tamin'ny fihetsiketsehana, nilaza i Ivanović fa tsy nitranga io fanafihana io raha toa ka nanao fanadihadiana araka ny tokony ho izy mikasika ny fanafihana an'i Lakic tamin'ny taona 2012 ny manampahefana. Araka ny filazany, nanome fahatsapana ireo andrim-panjakana fa namaha ny fanafihana an'i Olivera Lakić teo aloha izy ireo tamin'ny fisamborana ireo “mahantra sasany avy any amban'ny tanàna”, saingy tsy mbola fantatra mihitsy hoe iza no nanome baiko ny fanafihana ilay mpanao gazety.
“Sarin'i Olivera Lakić: Hisy olona tsy maintsy hamaly izany amin'ny ho avy” – pikantsary tao amin'ny pejin'ny tranonkala Vijesti.
Nilaza i Nikola Marković, filohan'ny Vaomieran'ny Fanadihadiana momba ny Fanafihana mpanao gazety fa efa nampitandrina izy ireo fa ny valin'ny raharaha teo aloha tsy voavaha dia mitarika tsimatimanota. “Tsy nisy tamin'ireo tranga fanafihana ny ‘Vijesti’ voavaha araka ny tokony ho izy,” hoy izy tao amin'ny fihetsiketsehana.
#SafeJournalists#SMCG condemns the brutal attack on our colleague Olivera Lakić, journalist of @Vijestime and asks the relevant institutions: how long journalists in 🇲🇪 will have to fear only because they want to do their job the best they can? https://t.co/DFSUA60hjA
#SafeJournalists#SMCG manameloka ny fanafihana feno herisetra nihatra tamin'i Olivera Lakić mpiara-miasa aminay, mpanao gazety ao amin'ny @Vijestime ary manontany ireo andrim-panjakana lehibe hoe: mandra-pahoviana ny mpanao gazety no hatahotra satria te hanao fotsiny ny asany amin'ny fomba tsara izay azony atao izy ireo?
Olom-pirenena an-jatony maro no nitangorona teo anoloan'ny Governemantan'i Montenegro mba haneho ny tsy fahafaham-pon'izy ireo manoloana ny fanafihana farany nihatra tamin'ny mpiara miasa aminy Olivera Lakić, mpanao gazetin'ny Vijesti mpivoaka isan'andro! #VilenceAgainstJournalists #FreedomOfMedia #Media #Montenegro
Nandray anjara tamin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo ihany koa ny ONG sy ny olom-pirenena:
Ny fanafihana ilay mpanao gazetin'ny Vijesti, Olivera Lakić dia fanafihana ny fahalalaham-pitenenana sy ny asa fanaovan-gazety fanadihadiana ao Montenegro, hoy ny tale mpanatanteraka ao amin'ny ONG Prima Aida, Perović Ivanović.
Nanakiana ireo fanambaràna tsy misy dikany nataon'ny manampahefam-panjakana, izay mifantoka amin'ny maha-lahy sy maha-vavy, fa tsy ny fototry ny fanafihana ihany koa ny olom-pirenena sasany.
Mampihoro-koditra ireo fanambaràna nataon'ny minisitry ny governemanta Nuhodžić sy ny ekipany momba izany fa “fanafihana atao amim-behivavy”! izany.
Olombelona, Atoa Minisitra, olombelona no notafihana. Fanafihana olona. Fanafihana asa. Fanafihana ny marina. Fa tsy fanafihana momba ny ara-nofo na maha-lahy sy vavy.
Nanakiana ny fandraisana anjara tamin'ny fihetsiketsehanaa, izay heveriny fa ambany loatra, ihany koa ny hafa.
Tamin'ny fihetsiketsehana, araka ny efa nampoizina. tsy manana olom-pirenena i Montenegro.